China mpanamboatra vy vy sy mpamatsy | Famoronana Bocheng
Ny vy vy dia ampiasaina amin'ny vanim-potoana fananganana zavamaniry herinaratra mba hanitsiana ny fitovizan'ny vatan'ny vy na hametrahana sy hanamboarana fitaovana mekanika sy fitaovana milina. Ny vy oblique vy dia ampiasaina amin'ny fametrahana sy fanitsiana ny firafitry ny vy, ary koa ny fametrahana sy fanitsiana ny fitaovana; ny mampiavaka azy dia: ambonin-malama, avo lenta, tsy misy burrs manodidina, henjana tsara, ary mora ampiasaina
Fepetra takiana amin'ny vy wedge: ny fahamendrehana dia voafaritra arakaraky ny filàna, satria ny wedge amin'ny ankapobeny dia mampiasa ny sisiny ambony sy ambany, noho izany ny fepetra takiana amin'ny lafiny efatra amin'ny ankapobeny dia tsy avo, ary ny hamafin'ny vy vy dia 6.4; Ny hamafin'ny faritra amboniny sy ambany amin'ny vodin-kazo dia 12.5, 6.4, 3.2, 0.8, sns., Raha avo kokoa ny marina, ny fisaka sy ny fitovizan'ny vy vy namboarin'ilay grinder dia mety tsy hihoatra ny 0.03mm. Ny hatevin'ny vy vy dia azo faritana arakaraka ny tena filàna sy ny fitaovana ary ny fanoritsoritana ny fitaovana; ny tehezan'ilay vy vy dia tokony ho 1 / 10-1 / 20, ny vy vy mihetsiketsika na fitaovana marim-pototra Ilay tehezan'ilay shim) dia mety ho 1/40. Rehefa mampiasa vy vy, dia tokony ampiasaina miaraka amin'ny fisaka shim ny mitovy famaritana. Ny vy vy dia tokony ampiasaina tsiroaroa. Ilay hantsana iray ihany no tokony hampiasaina.
Ny sary an-tsoratry ny vy vy dia namboarina mifanaraka amin'ny tena ilaina ilaina fototra fotony, ary avy eo dia namboarina araka ny sary.
Ahoana ny fampiasana ny vy vy
Mametraha shim fisaka amin'ny fototra simenitra, ary apetraho eo ambonin'ny shim fisaka ilay vy vy roa. Rehefa manamboatra dia mampiasa marotoa hamelezana vy vy roa, ny tehezan'ilay vy vy dia ampiasaina hampiakarana na hampidinana ireo fitaovana hahatratrarana ny tanjon'ny fanitsiana ny haavony. Aorian'ny fanitsiana ny haavony dia alao ny vodin-vy amin'ny fototr'ireo fitaovana hahatonga azy ireo ho mafy orina sy mafy orina. Ary farany, araraka amin'ny beton izy io mba hitazomana ny fitaovana ho amin'ny ambaratonga tsara mandritra ny fandidiana, hampihena ny masinina sy ny ranomaso ary hampihena ny vidin'ny fanoloana ny kojakojam-pitaovana.
Teo aloha: Takelaka vy nopotehina tanana nopotehina
Manaraka: Takelaka vy vita amin'ny vy mihintsana